I-AOL Whitelist -Uyifumana njani i-Whitelist nge-AOL
Mhlawumbi kungenxa yokuba iseyeyona inkulu ISP kwaye uninzi olugqibeleleyo malunga ne-imeyile, i-AOL ngokwenene inayo inkonzo emnandi yePostmaster kwi-intanethi. Kwafuneka ndiqhakamshelane nabo xa umthengi exela ukuba banemicimbi nge-imeyile yokufikelela kwiidilesi ze-imeyile ze-AOL. Ngokuqinisekileyo, safumanisa ukuba iidilesi ze-IP zesicelo sethu zazivaliwe.
Oko kuvakala kuyinto eyoyikekayo, ngokungathi besenza ugaxekile okanye into ... kodwa asiyiyo. Zonke ii-imeyile zethu ziyathengiselana okanye ziyamema kwindalo. Ngapha koko, akukho meyile yentengiso iphuma kwezi dilesi. Nditsalele umnxeba umhlobo olungileyo kunye nokuzisa, uGreg Kraios, kwaye wandibeka ngqo ngolwazi lokunxibelelana nabaphathi beposi be-AOL kunye Iwebhusayithi ye-AOL Postmaster. Ndibanikile umnxeba kwaye bandazisa ukuba ngawaphi amanyathelo endinokuwathatha ukuze ndingahlulwa kwaye ndingene kwindawo emhlophe.
Ndifumene eyona ngxaki yethu inkulu kukuba inkqubo yethu ibithumela i-akhawunti ye-imeyile ye-AOL engalunganga ngokujonga kwethu ukubuyela umva kwe-DNS kukhubazekile. Ukuguqula i-DNS yindlela ye-ISP yokujonga indawo yakho kunye nolwazi lwenkampani ngedilesi ye-IP evela kuyo. Ngokuyicima, sakhangeleka ngathi si-spammer. Ngeedilesi ezimbi ngokwaneleyo - i-AOL igqibe kwelokuba ijonge ukuba ngoobani. Xa bengazi ukuba singoobani, basivimba. Yenza ingqondo! Andikwazi ukuthi ndibasola.
Emva kokuba i-Reverse DNS inikwe amandla, i-AOL yehla ibhlokhi. Ndikwathethile neqela lethu lokuThengisa ndaza ndabaxelela ukuba bayeke ukwenza iidemo ngee-imeyile ze-AOL (zezona zilula ukuzichwetheza, akunjalo?). Emva kokuba ibhlokhi iyekile, uyavunyelwa ukuba ufake isicelo sokugunyaziswa kwindawo yePostmaster. Ndisebenzise okungenani amaxesha ali-XNUMX-kodwa ndakhawuleza ndafumanisa ukuba amadada akho kufuneka abe kumqolo ngaphambi kokuba wenze:
Sinike amandla ukuGuqula ukuKhangela kwi-DNS kwiidilesi nganye ze-IP esizithumela kuzo i-imeyile.
Kwafuneka ukuba sisete ingxelo yedilesi ye-imeyile ye-AOL ukuze isibhale xa kukho imiba ye-imeyile. Siqwalasele gadalala @. Sisebenzela ukuseta i-imeyile yesiqhelo ye- "Iimpazamo-Ku" kodwa sisiqalo esihle.
Kwafuneka silinde kwiintsuku ezimbalwa emva kokuba singavulelwanga.
Indawo yakho kufuneka idibanise idilesi kunxibelelwano lwakho kunye neempendulo zedilesi ye-imeyile. Unga bhalisa idilesi ye-imeyile ye-FBL kwi-AOL.
Ukuba unemimandla eyahlukeneyo, kuya kufuneka ufake isicelo ngasinye.
Qiniseka ukuba ujonge iidilesi ze-imeyile ozihambisile. Kuya kufuneka ucofe ikhonkco lokuqinisekisa ngaphambi kokuba basebenze kwisicelo sakho se-whitelist.
Inyathelo lokugqibela kukulinda impendulo. Ukuba uyacinywa, ungatsalela umnxeba abaphathi bePosi kwaye ubabonelele nge-id yesalathiso. Oku kuyabavumela ukuba bajonge ngokukhawuleza kwaye babone into engalunganga. Omele ukwenza oku ixesha elithile!
Ndijonge phambili kumhla esinokuthi sityhalele ezi-imeyile kwezethu umboneleli wesevisi ye-imeyile Inkqubo ukuze singazikhathazi ngayo! Ndilinde ukukhutshwa ngokusesikweni kwenkqubo ye-imeyile yentengiselwano (endincedileyo ukuyichaza!) Kunye nokukhula kwinkampani yethu. Ngokukhawuleza xa sinokusebenzisa iinkonzo zabo zokuhambisa, kungcono!
I-AOL ineenkonzo ezintle zePostmaster, kodwa kungcono ndingazange sinyamezele intloko kwaphela. Inqaku elinye, ukuba uyazibuza ukuba ingaba andikhathali na ukusithintela okanye ingxaki ethathayo ukusenza mhlophe… hayi kwaphela. Ndiyathanda ukubona inkampani iphaphile malunga ne-SPAM kwaye ijonge abathengi bayo.
Kuthathe iinzame ezimbalwa ngaphambi kokuba sibe nembali eyaneleyo yokuposa i-AOL ukuba mhlophe, kodwa benze emva kwemizamo embalwa:
Isicelo sakho se-Whitelist, kunye nekhowudi yokuqinisekisa ye-xxxxxxxx-xxxxxx, samkelwe.
Andiqinisekanga ukuba ii-imeyile zakho ziyavalwa okanye akunjalo? Qiniseka ukuba usebenzisa ifayile ye- Isixhobo sokubeka iliso kwi-inbox ukufumana nokujongana nemiba ethile kwi-ISP.
tags: 250okAOLuluhlu lwabantsunduumphathi weposimhlophe uluhluivaliwe imeyilefblloop yombikoukubekwa ebhokisiniumboneleli ngenkonzo ye-intanethiispisihluzi se-junkispemuizikhalazo zogaxekileIsihluzi sogaxekile